नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप कहिले आइपुग्छ ? यसो भन्छन बैज्ञानिक – – Life Nepali
नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप कहिले आइपुग्छ ? यसो भन्छन बैज्ञानिक –
काठमाडौं, २८ साउन । रुसले कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन विकास गरी अक्टोबर महिनामा सर्वसाधारणमा प्रयोगमा ल्याउने जनाइसकेको छ । उसले विभिन्न देशहरुमा भ्याक्सिनको माग भइसकेको जनाएको छ । अमेरिकाले र युरोपमा पनि भ्याक्सिनको विकास हुँदैछ । सम्भवत सन् २०२१ को शुरुमा भ्याक्सिन विकास गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ । चीनले सैनिक र स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना भ्याक्सिनको प्रयोग शुरु गरिसकेको छ । *** पूरा भिडियो हेर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला ***
मार्डना कम्पनिले भ्याक्सिन अमेरिकामा प्रतिडोज ३९ डलरमा विक्री गर्ने तयारी समेत गरेको छ । तर, अन्य बजारमा मुल्य घटबढ हुनसक्छ । अस्ट्राजेनेका, जोनसन एन्ड जोनसन र पिफिजरले भ्याक्सिनबाट नाफा खाने उद्देश्य राखेका छैनन् । उनीहरुले विना नाफा भ्याक्सिन कम मुल्यमा विक्री गर्ने तयारी गरेका छन् । मोर्डनाले भने भ्याक्सिन विना नाफा नबेच्ने जनाइसकेको छ ।
यसरी भ्याक्सिनको मुल्य, प्रभावकारिता र सक्रियताले पनि समयमा ल्याउन सक्ने अवस्था बन्नसक्छ । अहिले भ्याक्सिन विकासको गति र विश्वभर बढ्दो माग र आपूर्तिको अवस्था हेर्दा नेपालमा आउन कम्तिमा एक वर्ष लाग्न सक्छ । भारत र चीनले भ्याक्सिन छिटो उत्पादन गरेर छिमेक भएकाले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर दिन तयार भएमा भने एक वर्ष नलाग्न सक्छ ।
Previous भर्खरै WHO ले कोरोनाबारे दियो यस्तो खुसिको खबर –
Next दु:खद खबर – सोमबारदेखि ह’राइरहेका पत्रकार बलरामको श’व भे’टियो !
23 mins ago Life Nepali
36 mins ago Life Nepali